UFILA BRAZILLIA: JUMP LEEDS UPHONONONGO LWEALBHAMU - IINDABA
Njengomxhuzulane, ingubo ye-downtempo yase-UK uFila Brazillia ixhomekeke ngokupheleleyo. Ndiyathandabuza ukuba nabani na angatsho ngokunzulu ukuba ...
Njengomxhuzulane, ingubo ye-downtempo yase-UK uFila Brazillia ixhomekeke ngokupheleleyo. Ndiyathandabuza ukuba nabani na angatsho ngokungathandabuzekiyo ukuba naziphi na ii-albhamu zabo ezilithoba ziyadana. Ngokuqinisekileyo, akukho kukhululwa ngaphandle kokutyibilika okuncinci, kodwa ubuncinci i-duo kaSteve Cobb kunye noDave McSherry abakaze bakhuphe ukosula ngokupheleleyo Iidrukqs .
Tsiba iLeeds unezinto ezimbalwa ezityibilikayo kunangaphambili Ukuchukumisa kwengubo , kodwa ndingathanda ukucinga ukuba zivela kulongezo lwegama lomculo (uSteve Edwards woBukho) kunokuba ibe sisalathiso sokuphelelwa lixesha. Ukuchukumisa kwengubo Ngokwenyani ibingumzekelo wokuhla. Endaweni yokuba ibe yingqokelela yeesampulu ezinje ngeLemon Jelly's okanye iBent, ialbhamu yesibhozo kaFila Brazillia yayisisandi somculo esimangalisayo, kodwa esasicwangciswe ngocoselelo sinyanzeliswa ziihipsters ngokuqinisekileyo ezithatha iiCassavete.
Kuthatha ukuzibophelela ukuze ungene kwi-albhamu yeFila Brazillia- ICobb kunye noMcSherry abayeki ukuzonwabisa ngomhla wokuqala. Ngexesha leeyure ezininzi endizichithileyo ndetyisa ii-albhamu zazo ndiye ndafumanisa zonke iintlobo zobulumko obufihliweyo, izinto ezihambelana noko kuhambelana noko, kunye neengoma ezimnandi. Tsiba iLeeds yahluke kancinane, nangona kunjalo. Ibhendi ingcwabe zonke ezi zinto zimangalisayo kwaye isasaze umhlaba ongaphezulu wezakha mzimba we-Ed & r & B; ukugcuma kubo bonke.
Njengoko wayengqina kubukho bakhe Zonke iiNkqubo zihambile icwecwe, uEdward unelizwi elichanekileyo lelo klasi lingenazintsimbi lendlu enzulu esebenza njengefowuni yokuhlangana kwabaxhasi beesamente. U-Edwards unokulwa kwaye asebenzise ubuchule bakhe be-vibrato ngexesha elinobunzima kwaye angazibopha ii-hallelujah ngokunyanzelekileyo njengayo nayiphi na ivangeli ye-diva. Kodwa kukho iingxaki ezithile ekubekeni izakhono ezinjalo ezikhulayo phakathi kwe-downtempo ye-Fila Brazillia. Kwityala lebhendi, banomda uEdward kwiitrekhi ezine.
Njengokuba i-hangover evela kwiglasi yeglasi umzobo we Ukuchukumisa kweklasi , Tsiba iLeeds iqala ngelungu lecawa elichaza umxholo onyanzelisayo wengoma yokuvula, 'Bumblehaun.' Kodwa ayihlali icawa ixesha elide. Ingoma iguqula ibe yiparody ekhethekileyo yeeklabhu ze-funk ezingama-80, umjelo osulelayo wee-Euroclash retro-futurists ezingakuvuyela ukuzonwabisa nge-Commodore 64 yazo. UCobb noMcSherry babonisa ngokwenene ngexesha le-'Bumblehaun 'kwaye okokuqala bamamele inkolelo yokuba abazisebenzisanga zonke iijusi zabo zokuyila kwingoma yokuvula.
ukuqengqa amatye aluhlaza okwesibhakabhaka kunye nokuphononongwa okunesithukuthezi
Kodwa i-duo iqala nje, njengoko 'iMotown Coppers' ibonisa. Ngaphandle kwe-huzz ye-buzzy haze, i-bassline inyathela phezulu iqokelela bonke abantwana abalahlekileyo kwaye, kuthotho oluzukileyo lwe-chimes kunye ne-blips eyamkelayo, ibathumela kwilizwe lemilingo leelekese. Nge-cut 'n' pasted hollerin 'blues man,' Spill the Beans 'ekuqaleni kuvakala ngathi kukubhida kwemali kaMoby. Emva kwekatala yomculo we-cock-rock, u-Edwards unyukela kwimic ukuba ahambise iingoma zakhe zethenda malunga nokuthetha inyani kunye nokuziva ubhetele ngakumbi ekuchazeni.
'I-DNA' izisa imeko ezantsi kumanqanaba okwenza i-wispy yegitala kunye nesampulu yabaFileyo Ngaba Ungadanisa 'Inyoka neNyanga.' 'I-DNA' ibuyela kumdaka ophuphayo weGridi 'Floatation' kunye neBBG 'Snappiness.' U-Edwards ubuya 'Sakha iiArks' kwaye, kunye ne-bass probe, ukhupha i-falsetto yakhe enamandla njengoko ephikisana neMorlocks kunye nendlela 'iibhokhwe zihamba ngayo / iibhokhwe zihamba / kodwa zihamba ngamaqhawe.' UCobby kunye noMcSherry batshatisa u-Edward 'phantasmagoric twaddle nge-wah-wahed clavinet kunye nobungozi obuninzi. 'I-Percival Quintaine' iguqula umgca wegitala onomdla kwi-'Cawa ngeCawa enegazi 'kwaye uphinde uyisebenzele Starsky kunye Hutch imoto ileqa iHuglem kaHuggy Bear.
'Ukuhlwa' kubuyela kwi-surreal dreamcape ethi 'Sakha iiArks' - kodwa kule yokulala uEdward 'unokuva imibala kwihlabathi liphela' kwaye abone 'calcium ngasemva kwakho.' Mhlawumbi ibhendi bekufanele ukuba iyayiqhuba le ngoma ngokuhla kuqala? Nangona imibono kaEdward yasebusuku isondele ekuphazamiseni, ayisiyonto xa kuthelekiswa ne-gaffe eyoyikekayo egqibayo kunye nemars Tsiba iLeeds . 'Ingca eluhlaza eluhlaza yaseKhaya' yindawo ethandabuzekayo yemifuno etyhafisayo engenazintloni Amaxesha aPhakamileyo isihlwele. Olu luhlobo lwe-gauche mishap endiyilindeleyo kumagcisa asika kwaye ancamathisele iisampulu zokugcina izinto kwi-Fruity Loops isoftware yokudala ingoma, hayi kwi-duo ekhethekileyo enetalente uthando lwabo lomculo kunye nomdla wokudlala, kum, ongenakuphikiswa njengoNewton ukufumanisa okukhulu.
Nicki minaj drake lil wayne ingoma
imeko yongxamiseko lil tjay
ubisi olungathathi hlangothi ihotele IVinyl
I-beyonce ebomvu ye-lobster lyric